मेरो श्री मानको यौ न श क्ति क म छ, के गर्ने होला ? – AB Sansar
October 2, 2020 October 2, 2020 adminLeaveaComment on मेरो श्री मानको यौ न श क्ति क म छ, के गर्ने होला ?
म २७ वर्षीया वि वाहित महिला हुँ । तीन वर्षको प्रेमपछि हाम्रो मागीविवाह भएको हो । विवाहअघि हामीबीच यौ न सम्पर्क सीमित रूपमा सुरक्षित हिसा बले भैसकेको थियो । हाल विवाह भएको एक वर्ष पुग्यो । यौ’न सम्प’र्क गर्दा मेरो श्रीमानको वी र्य स्खलन एक मिनेटभित्र एकदमै छिटो भैहाल्छ, जसले गर्दा म सन्तुष्ट हुन सकिरहेकी छै न ।
यसका लागि उपर्युक्त उपाय के हुन सक्छ ? यौ न सम्पर्क सामान्यतः कति अवधिको हुन्छ ? यौ नस न्तुष्टिलाई पो जिसनले फरक पार्छ कि ? गर्भवती महिलाले यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन ? हुन्छ भने कुन पोजिसनमा गर्न सकिन्छ ?उत्तर : शीघ्र स्खलन के हो ? :
किन्सेले गरेको अध्ययनअनुसार यो’निमा लि’ङ्ग प्रवेश गराएको २ मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषको चरमसुख पाएको देखिएको थियो । शीघ्र स्खललाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने निकै बहस पनि वैज्ञा- नि हरूमा नभएको होइन । लि ङ्ग यो निमा प साएको ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० ध क्कामै वी र्यस्खलन भए छिटो स्खलन भएको भनेर परि भाषित गर्ने प्रयास पनि भए,
तर अहिले आफू तथा आफ्नो यौ नजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्य स्खलन भए त्यसलाई छिटो वीर्यस्खलन भएको स्थिति अर्थात् शीघ्र स्खलन मान्न थालिएको छ । यो कुरा तपाईंको हकमा पनि लागू हुन्छ ।यौनसम्पर्कलाई कति समय लम्ब्याउने भन्ने कुरा दम्पतीमा भर पर्छ । महिलालाई चरम सुखको स्थितिसम्म पुग्न केही बढी समय लाग्न सक्छ,
त्यसैले पुरुषले लिङ्ग प्रवेश गराएर यौनसम्पर्क सुरु गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त मात्रामा पाक्क्रीडामा संलग्न हुन सके तपाईंलाई सहयोग पुग्थ्यो । यो निमा लि ङ्ग नछिराई किन वीर्य स्खलन भएको होला ? प्रायः सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बेला वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् ।
विरलै भए पनि केही समस्याको कारण त होइन भनेर केलाउन पनि बिर्सनु हुँदैन । आक्कल- झुकक्ल यस्तो शीघ्र स्लखन हुँदा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन । अनावश्यक रूपमा चिन्ता गरे झनै समस्या बढाउँछ । शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भने पक्कै तपाईंले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यो समस्यालाई कम गर्न आफैंले गर्न सकिने केही उपाय छन् यौनसम्पर्क रोक्ने-सुरु गर्ने यौनसम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिङ्ग योनिबाट बाहिर झिकेर केही वेर यौनक्रीडालाई नै रोक्ने र यौन उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौनक्रीडा सुरु गर्ने ।
आशन परिवर्तन गर्ने: लो ग्नेमान्छे माथितिर र महिला तलको सट्टा महिला माथितिर बसेर सक्रिय भै यौनसम्पर्क गरे पनि शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ । लि ङ्ग अँ ठ्याउने : यौ नस म्पर्क गरिरहँदा स्खलन होला जस्तो भएपछि तु रुन्तै लिं ग यो निबाट बाहिर झि केर लि ङ्गको फे दलाई बे स्सरी अँठ्या उने र वीर्य स्ख लन हुन नदिने । यौ न उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौ नक्रिडा सुरु गर्ने ।
क न्डमको प्रयोग गर्ने : त्यस्तै क न्डमको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको सम स्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो बेलामा चि प्लो प दार्थ कम भएको तथा बा क्लो कि सिमको कन्डमले बढी फा ईदा पुर्‍याउँछ । मांसपेशी प्रयोग गर्ने : पि साब आउँदा रो क्न प्रयोग गर्ने मांसपेशीको क सरत गरेर वी र्य स्ख लनलाई रो क्ने अ भ्यास गर्न सके पनि फाइदा पुग्छ ।
वी र्य स्खलन नियन्त्रणको अभ्यास : यो दीर्घकालीन उपचारमा सहयोगी हुनसक्छ । ह स्तमैथुन गर्ने र वीर्य स्खलन होला जस्तो भएपछि रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः ह स्तमैथुन सुरु गर्ने र वी र्य स्खलन होलाजस्तो रोक्ने र यो प्रक्रिया दोहार्‍याउने । वीर्य स्खलनलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि आफ्नी श्रीमती -यौ नसाथी सँ ग यौ न सम्पर्करहित यौ न क्रि याकलापमा सं लग्न हुने तर यौ न सम्पर्क भने नगर्ने ।वी र्य स्खलन हो लाजस्तो भए पनि क्रियाकलाप रो क्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने ।
आफ्नो यौ नसा थीसँग पहिले कुनै चिप्लो पदार्थ प्रयोग नगरी र पछि चिप्लो पदार्थ प्रयोग गरेर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुने । अब वीर्य स्खलनमा पर्याप्त नियन्त्रण भयो जस्तो ला गेपछि लि ङ्गलाई बिस्तारै भगक्षेत्र -यो निक्षेत्र) मा स्पर्श वा हल्का घर्षण गर्ने तर यौनसम्पर्क भने नगर्ने ।
यस्तो गर्दा वीर्य स्खलन होलाजस्तो भए यी क्रियाकलाप गर्न रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः सुरु गर्ने ।वी र्य स्ख लनलाई पर्याप्त नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि माथि भनिएजस्तै पहिले श्रीमती बढी सक्रिय हुने गरेर यौनसम्पर्क सुरु गर्ने अनि वी र्य स्खलनको नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिती वा क्षमता हेर्दै वि विध तरिका अवलम्बन गर्दै यौनसम्पर्कलाई अघि बढाउने ।
समय र धै र्यता निकै लाग्ने भए पनि वी र्य स्खलन नियन्त्रणमा यो अभ्यास निकै लाभदायक हुनसक्छ र यसमा श्रीमान्लाई तपाईंको पर्याप्त सहयोग चाहिन्छ
OMG नेपालमा आज एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित देखिए
खुले बिद्यालय, तर सबै बिद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने छ यस्ता नियमहरु ! सबैले एकपटक पढ्नैपर्ने